Deciding factor betweenaGood Manager andaBad One (Part-1) ﻿
Deciding factor betweenaGood Manager andaBad One (Part-1)
ကောင်းမွန်တဲ့ (တော်တဲ့) မန်နေဂျာတစ်ဦး ဟုတ်/မဟုတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော အရာများ (အပိုင်း - ၁)
မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်လာစေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိနိုင်ဖို့ဟာ ဝန်ထမ်းတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ဒီရာထူးကို လိုချင်ကြတာလဲ? အဓိက နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
ဒီရာထူးကို လိုချင်နေခြင်းဟာ ရာထူးနောက်မှာ ကပ်ပါလာမယ့် လူအများရဲ့ လေးစားမှုကို ခံချင်လို့လား? ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ရဲ့ career လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ဖို့လား? ဒါမှမဟုတ် ပိုမိုတိုးမြင့်လာမယ့် လစာငွေကို မက်မောကြလို့လား?
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဒီအချက်တွေထဲကတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကို လိုလားကြတဲ့အတွက် မန်နေဂျာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ်ခုကို ဝန်ထမ်းများက လိုချင်စိတ်ပြင်းပျနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မန်နေဂျာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ်ခုဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်းတွင် အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သင့်ဖက်က လိုအပ်တဲ့အသိပညာနဲ့ အတတ်ပညာများလည်းရှိနေပြီး ရာထူးလည်း တိုးခြင်းခံရပြီဆိုရင်တော့ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ မန်နေဂျာတစ်ဦးကဲ့သို့ ပြုမူနေထိုင်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ယခုတစ်ပတ်မှာတော့ www.jobsinyangon.com ကနေ မန်နေဂျာများအနေနဲ့ ပြုလုပ်သင့်တဲ့အရာများနဲ့ မပြုလုပ်သင့်တဲ့အရာများကို အပိုင်း (၂) ပိုင်းခွဲ၍ တင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကောင်းမွန်တဲ့ (တော်တဲ့) မန်နေဂျာများအနေနဲ့ လုံးဝမပြုလုပ်သင့်တဲ့ အမှားများ -
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မိမိတို့ရဲ့ career များကို စတင်ခဲ့စဉ်က အချိန်များကို ပြန်လည်၍ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင် . . . စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ ယခင်က သာမန်ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရာတွင် များစွာသောလုပ်ငန်းများနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူများ၊ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်များအတွင်း ဆိုးရွားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများ အစရှိတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်၍ စီမံခန့်ခွဲပုံများကိုလည်း မှတ်မိကြဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ယခင်က မိမိတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ မန်နေဂျာများရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံအလွဲများကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်များကို စံနမူနာယူခြင်းတို့ကို ယခုကဲ့သို့ မိမိကိုယ်တိုင်က အုပ်ချုပ်သူနေရာသို့ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြုလုပ်ဖို့အသင့်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူများရဲ့ ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ မကြိုက်ပဲ ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ နှစ်သက်မှုရှိခဲ့သလဲ? ဝန်ထမ်းများရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ကောင်းမွန်စွာတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အချက်များရှိ၊ မရှိ? ချည်းကပ်ရလွယ်ကူမှု ရှိ၊ မရှိ? အစရှိသည်တို့ကို ပြန်လည်၍ သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ပိုမိုများပြားလာတဲ့ အလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေရခြင်းကြောင့် အချိန်များပိုမို၍ကြပ်တည်းလာသည်နှင့်အမျှ မန်နေဂျာများအနေနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် မှားယွင်းမှုကလေးတွေလည်း ဖြစ်လာတတ်တာဟာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ team ကို ဦးဆောင်နေစဉ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ (တော်တဲ့) မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေနဲ့ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အမှားများလည်း ရှိနေပါတယ် . . .
၁။ အသေးစိတ်လိုက်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Micromanagement)
သုသေသီများရဲ့ လေ့လာမှုများအရ ဝန်ထမ်းများရဲ့ ၇၉% ကျော်ခန့်ဟာ အသေးစိတ်ကိုလိုက်၍ စီမံခန့်ခွဲနေမှုမျိုးကို တွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အလုပ်ခွင်အတွင်းမှာ သင့်ရဲ့မန်နေဂျာက သင့်ကို အသေးစိတ်အချက်ကလေးတွေကအစ လိုက်လံပြောဆိုနေခြင်း၊ လိုက်ကြည့်နေခြင်းဟာ တော်တော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ဝန်ထမ်းများကမဆို သူတို့အား အသေးစိတ်လိုက်လံ၍ စီမံခန့်ခွဲနေခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားနေသူများအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ထမ်းများအား သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုပေးထားရပါမယ်။ သူတို့ရဲ့ မန်နေဂျာများဟာ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းများအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ ဝန်ထမ်းများမှ ခံစားနေရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာများဟာ အလွန်အမင်း စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခြင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်စရာကိစ္စများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခရေစေ့တွင်းကျရှင်းပြခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေပါက ဝန်ထမ်းများက သူတို့ရဲ့မန်နေဂျာက သူတို့ရဲ့လုပ်ကိုင်မှုများကို ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဟူ၍ အထင်ရောက်သွားစေပြီး သူ/ သူမရဲ့စိတ်ထဲတွင် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ အသိအမှတ်မပြုဘူးဟူ၍ ခံစားလာရခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အဆုံးသတ်တွင် အလုပ်မှထွက်ခွာသွားတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၂။ ပြဿနာဖြေရှင်းမှုပုံစံ (Solution) များကို လိုက်လံပြောပြနေခြင်း
ကောင်းမွန်တဲ့မန်နေဂျာများဟာ ဝန်ထမ်းများအလုပ်တွင်တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတိုင်းကို အရံသင့်ပြောပြလေ့မရှိပါဘူး။ ထိုအစား ဝန်ထမ်းများရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာမှုရှိလာစေရန်နှင့် အခက်ခဲဆုံးသော အခြေအနေများကိုပါ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကို ပြုလုပ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သောမန်နေဂျာများကတော့ ပြဿနာဖြေရှင်းမှုပုံစံများကို ပြောပြလေ့ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ပြဿနာတစ်ခုကို ချက်ခြင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်သည့်အခါများတွင် သူဟာ အခြားသောဝန်ထမ်းများထက် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ဖြစ်မှာဖြစ်သော်လည်း ထိုသူမရှိတဲ့အခါတွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက ဝန်ထမ်းများဟာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၃။ ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးဖို့ပျက်ကွက်ခြင်း
ကြိုတင်စီမံမှုမရှိခြင်းနဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ team ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမယ့်အချက်များမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောမန်နေဂျာများဟာ တစ်နေကုန်အလုပ်များပိနေတဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါ ဝန်ထမ်းများဟာ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရသလဲဆိုတာကို သိရှိတော့ခြင်းမရှိပဲ ဒီအလုပ်ဟာ သူတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ organization နဲ့ သူတို့အတွက် မည်မျှအရေးပါမှုရှိသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရည်မှန်းချက်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များမရှိပါက လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ကျဆင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းတို့လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းပရောဂျက်များနဲ့ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စများကို အစီအစဉ်မှားယွင်းစွာ လုပ်ကိုင်မိခြင်းတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ပေးရာ၌ အဆိုပါရည်မှန်းချက်များဟာ ရရှိနိုင်ရန် လွန်စွာခက်ခဲတဲ့အရာများဖြစ်နေပါကလည်း ဝန်ထမ်းများဟာ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုများ၊ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့မန်နေဂျာများဟာဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ရရှိအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေမယ့် ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ပေးတတ်ပြီး ထိုရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါက reward အနေနဲ့ တစ်ခုခုပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ဖို့ကိုလည်း စီစဉ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
၄။ မာန်မာနကြီးတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးနဲ့ ဦးဆောင်နေခြင်း
မာန်မာနကြီးတဲ့ မန်နေဂျာများဟာ သူတို့က အခြားသူများထက်ကျွမ်းကျင်ပြီး ပိုမိုတတ်ကျွမ်းမှုရှိတဲ့အတွက် မန်နေဂျာဖြစ်လာတာဟူ၍ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတွေးတတ်တဲ့သူများဟာ မကြာခဏဆိုသလို သူတို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားများအပေါ် သူဟာပိုတော်ကြောင်း၊ သူဟာပိုတတ်ကြောင်း ပြသလာတတ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ . . . သူတို့ထံတွင်သာ အကောင်းဆုံး idea များနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ အချက်အလက်များရှိနေတယ်လို့ ထင်မြင်နေပြီး သူတို့ရဲ့ရာထူးကိုအသုံးပြု၍ အခြားသူများကို ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ်တတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ များစွာသောဝန်ထမ်းများဟာ ထိုသို့ လွန်ကဲစွာမာန်မာနထောင်လွှားပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့မန်နေဂျာများရဲ့ လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက်မှုမရှိကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုသူဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မသင့်တော်သူတစ်ဦးဟူ၍ ထင်မြင်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မာန်မာနထောင်လွှားလွန်းတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမှန်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းကို ပိတ်ဆို့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုသို့သောမန်နေဂျာများဟာ သူတို့ရဲ့ team များနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပိုမိုဝေးကွာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတော့မှာမဟုတ်တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
၅။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် (သို့) ကွယ်ရာတွင် မျက်နှာသာပေးခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျင်လည်ခဲ့တာ အချိန်ကာလတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများဟာ Office politics များနဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုများကို ရိပ်မိသိရှိနိုင်စွမ်းရှိနေပြီးသားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ မန်နေဂျာဖြစ်သူနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့အတွက် နောက်ထပ်လစာ (သို့) ရာထူးတိုးမယ့်သူဟာ ဘယ်သူဖြစ်နေမလဲဆိုတာကို ကြိုပြီးသိရှိနေနိုင်ပါက ဒါဟာဝန်ထမ်းများအဖို့ စိတ်ဓါတ်ကျစရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားလှတဲ့ တစ်ချို့သောမန်နေဂျာများဟာ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုကို အများရှေ့တွင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အခြားသောဝန်ထမ်းများရဲ့ အမြင်မှာတော့ စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာကောင်းလှပြီး အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကိုလည်း ကျဆင်းလာစေပါတယ်။
မန်နေဂျာအဖြစ် မိမိကဦးဆောင်နေရပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဒီအချက်ကို လွန်စွာသတိထားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါက ဝန်ထမ်းများအားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးများကိုတည်ဆောက်ထား၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက ချည်းကပ်ဆွေးနွေးရလွယ်ကူသောသူတစ်ဦးဖြစ်နေပါစေ။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသာကွက်၍ မျက်နှာသာပေးမိသလို ဖြစ်စေမယ့်အပြုအမူများကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။